विराटनगर | बैशाख २६, २०७९
नेपाली कांग्रेसको प्रभाव रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता नागेश कोइराला चुनावी मैदानमा छन् ।
कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला, गिरिजा र अहिलेको पुस्ताका नेता डा. शेखर कोइरालाको समेत गृहनगर रहेको विराटनगरको मेयरका लागि पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस युवा नेता नागेश चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
मेयर निर्वाचित भएमा गर्ने योजना र एजेन्डालगायत विषयमा मेयरका प्रत्यासी कोइरालासँग लोकान्तरका लागि विन्देश दाहाल र उद्धव थापाले कुराकानी गरेका थिए ।प्रस्तुत छ, कुराकानीको अंश :​
चुनावी अभियानमा हुनुहुन्छ, घरदैलो गरिरहनुभएको छ । कत्तिको थकाइ लागेको छ ?
पहिलेदेखि नै संगठनमा लागेको मान्छे, खट्दाखेरी केही समस्या भएको छैन । नियमितरूपमा खटिरहेको हुँदा अहिले खट्दा कुनै समस्या छैन ।
माहोल कस्तो बनिरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनको पक्षमा राम्रै माहोल बनिरहेको छ ।
जित्ने प्रक्षेपणको आधारमा तपाईं अहिले आफ्नो प्रतिस्पर्धीभन्दा कति अन्तरले अगाडि हुनुहुन्छ ?
अत्यधिक बहुमतले अगाडि छौं जस्तो लाग्छ । हाम्रो जीत सुनिश्चित छ ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई नागेश कोइराला मेयरको रूपमा किन आवश्यक पर्‍यो ?
म यहीँ कोशी अञ्चल अस्पतालमा जन्मेको हुँ । मेरा इष्टमित्र र नातागोता सबै यतै हुनुहुन्छ । इमान्दार मान्छे, सही मान्छे मेयर बन्न पायो भने नगरको हित हुन्छ भनेर सबैले भनिरहनुभएको छ । मेरो चाहना पनि विराटनगर बनाउने नै हो । मैले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन अर्थात् जनप्रशासनमा मास्टर्स गरेको पनि मेयर पद चलाउनका लागि उपयोगी हुन्छ भनेरै हो । यी सबै कारणले गर्दा विराटनगरको मेयर बन्ने योग्यता मसँग छ ।
तपाईं मेयर निर्वाचित हुनुभएमा विराटनगरमा मुख्य पाँचवटा के काम गर्नुहुन्छ ?
पहिलो, करको दायरा कडाइका साथ बढाउने र कर घटाउने । दोस्रो, महानगरपालिकाले अस्पताल बनाउने र त्यसमा स्थानीयहरूले सहुलियत दरमा निजी अस्पतालको जस्तो सुविधाका साथ उपचार पाउने । तेस्रो, विराटनगरको कुनै निमुखा विद्यार्थीले पढ्ने चाहना राख्छ भने महानगरपालिकाले उसको जिम्मा लिएर उसलाई पढाउने अनि सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयको गुणस्तर बढाउने ।
चौथो, विराटनगरमा रहेका खानेपानीका पाइपहरू बदल्ने र शहरवासीले धारामा थापेको पानी सिधै पिउन मिल्ने गरी गुणस्तर सुधार्ने । पाँचौं, विराटनगरलाई सफा बनाउने । यी आधारभूत एजेन्डा हुन् । यसबाहेक समुन्नत, हराभरा, सुरक्षित र आत्मनिर्भर विराटनगर बनाउनेछु ।
तपाईंलाई कांग्रेसभित्र पनि शेखर कोइराला पक्षको उम्मेदवारका रूपमा चित्रित गरिन्छ । यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?
मैले १३ वर्षसम्म पार्टीको संगठन तरुण दलको अध्यक्ष भएर काम गरें । संगठन चलाएपछि म पार्टीमा निर्वाचित कोषाध्यक्ष समेत भएँ । त्यसपछि एक कार्यकाल म निर्वाचित सचिव भएँ ।
अहिले म निर्वाचित उपसभापति छु । पार्टीका लागि मैले यति धेरै काम गर्दा पनि म मेयर पदका लागि योग्य ठहरिन्नँ होला त ? हो, डा. शेखर कोइरालाले मलाई टिकट दिलाउन पहल गर्नुभएको हो । तर पार्टी सभापति तथा अन्य शीर्ष नेतृत्वले पनि म जत्तिको मान्छेले नगर चलाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्नुभएकैले मैले टिकट पाएको हुँ ।
तपाईं मेयरको उम्मेदवार हुँदा विराटनगर कांग्रेस कत्तिको खुशी छ ?
महानगरपालिकाको सभापति र सचिव एकदमै खुशी हुनुहुन्छ । उहाँको साथ सहयोगले गर्दा पनि मलाई सजिलो भइराखेको छ ।
कांग्रेसमा अन्तर्घात पहिलेदेखि नै समस्याको रूपमा रहिआएको छ । तपाईं त्यसबाट मुक्त हुनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म मुक्त नै छु । कतैकतै छिटपुट त्यस्तो घटना हुने गरेको सुनेको छु मैले । तर त्यस्तो गर्ने साथीहरू सुध्रिनुहुन्छ भन्ने आश मैले गरेको छु । पार्टीको विधान र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूले र कार्यकर्ताहरूले गडबड गर्नुभएमा त्यहीअनुसारको सजाय पाउनुहुन्छ ।
विराटनगर धेरै ठूलो ठाउँ हैन । एकअर्काले के गर्छ भनी सबैलाई छर्लंग नै छ । अहिलेसम्म त सबैले सहयोग गरिरहनुभएको छ । कथंकदाचित् कसैले दुःख दिएछ भने उसलाई त्यहीअनुसार पार्टीबाट कारवाही हुन्छ । पार्टीको अनुशासन समिति, केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय समिति छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ– सबैले यसलाई मिलाएर अघि बढ्नुहुनेछ ।
स्थानीय तहको चुनाव एकदमै खर्चिलो भयो भनेर धेरैतिर हामीले गुनासो सुन्यौं । तपाईंहरू चुनावी खर्चको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
धेरै खर्च गरिँदैन । त्यही ५ लाख जति खर्च हुन्छ होला । भर्खरै पार्टीको महाधिवेशन सकिएको छ । सबै संगठन बनेकै छ र चुस्तदुरुस्त छ । सबै साथीहरू उत्सुक छन् । नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिने र जिताउने भनिरहेका छन् सबैले । साथीहरूले आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर सबै कुरा व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । सहजीकरण पनि भइरहेकै छ ।
नागेश कोइराला प्रशस्त सम्पत्ति भएको मान्छे हुनाले भ्रष्टाचार गर्दैनन् तर चुनावमा प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार उनै हुन् भन्दा रहेछन् नि ।
कांग्रेसमा लाग्ने हामी सबै साथीहरू बराबर हौं । हामी एउटै परिवारका सदस्य हौं । कसैको आर्थिक स्थिति राम्रो होला, कसैको ठीकै होला तर हामी सबै एकै हौं । चुनावमा अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने नै छैन । भर्खर महाधिवेशन सकिएको छ । हामीले धेरै तामझाम गर्नै पर्दैन । निर्वाचन आयोगले धेरै तडकभडक नगर्न निर्देशित पनि गरेको छ । त्यसले झन् सजिलो बनाएको छ ।
अन्तिममा, विराटनगरवासीहरूलाई तपाईं के अपील गर्नुहुन्छ ?
विराटनगर साँच्चिकै बनाउने भिजनरी, इमान्दार अनि जनताले कर तिरेको पैसा जनताकै हितमा प्रयोग गर्ने मान्छेलाई भोट दिनुस् । सबल र सक्षम मान्छेलाई जिताउनुस् ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट मेयरको भोट रुख छापमा र उपमेयरको भोट छाता छापमा हाल्न अनि वडाध्यक्ष सहित सम्पूर्ण उम्मेदवारलाई रुख वा गाछी छापमा भोट दिएर अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराइदिनुहुन म अनुरोध गर्छु ।
कम्युनिस्टको उद्गम थलो रतुवामाईमा कांग्रेसको दबदबा, एमालेले उल्ट्याउन सक्ला नतिजा ?
देशको राजधानी शहर रहेको काठमाडौं उपत्यका भित्रको दोस्रो ठूलो महानगर ललितपुरको मेयरका लागि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चिरिबाबु महर्जन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । २०७४ सालको प्रतिस्पर्धात्मक निर्वा...
जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका घटक दलहरूबाट जसपाका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि राजनीतिक षड्यन्त्र र बेइमानी भएको आरोप लगाएका छन् । लोकान्तरसँगको अन्तर्वार्तामा उनले गठब...